Kuchengetedza kuvanzika kwako (uye ruzivo rwekuonana) paunenge uchitenga imba yako inotevera - Social News Daily
Kuchengetedza kuvanzika kwako (uye ruzivo rwekuonana) paunenge uchitenga imba yako inotevera
Kana iwe uchitengera imba, unoziva kuti mutero ungave wakadii. Iwe uri kurongedza zvaunoda uye zvaunoda, ruzivo nezve musika zvakazara, kushanyira dzimba, kuisa mune zvinopihwa, kurambwa kune zvinopihwa, kutsvaga dzimba nyowani, uchinetseka kana izvo zvaunoda zvisipo, uchifunga kugadzirisa, kushanya dzimba iwe. handidi, kushanya dzimba dzausingakwanise kutenga, kuita zvibvumirano uye wobva wachinja pfungwa dzako uye kuita izvo zvibvumirano - zvinonetesa, kutaura zvishoma. Pamusoro pazvo zvese, kutyisidzira kwekuchengetedza data kuri pakakwirira-nguva, zvichiita kuti zvive nyore zvakanyanya kune chero ruzivo rwako rwemunhu rwakagovaniswa mukutsvaga kupedzisira rwave mumaoko asiri iwo. Izvi zvinotevera zvinoongorora matanho mashoma aungade kutora kuti ubatsire kuchengetedza kuvanzika kwako uye data rako pachako uchitenga imba yako inotevera.
Ndinonyatsoda Kunetseka Nezvekuvanzika?
Muchidimbu, hongu, munhu wese anofanirwa kunetseka nezve kuvanzika kwedata mazuva ano. Data yakapfuura oiri sechinhu chakakosha pasi rose, uye izvi zvinoreva kuti hazvina kumbobvira zvave nemubhadharo wakawanda kutevera hupenyu hwecybercrime. Hachisiri icho chete ruzivo rwemari rwunoda kuchengetedzwa; zvinhu zvakaita sezita rako, kero, nhamba yefoni, email kero, nhoroondo yekurapa, uye mapassword emazuvane saiti logins (nekuti vanhu vazhinji vanoshandisa mashoma mashoma mapassword ezvese) zvakakosha zvinoshamisa. MaHackers anoziva uko vanhu vanochengeta ruzivo urwu uye kuti vangaruwana sei. Kana mumwe munhu akakwanisa kuwana zvimedu zveruzivo, zviri nyore kwavari kuti vazadze ma blanks uye kuwana zvakasara kuti aba chitupa.
Kunyangwe vakasatora zvinhu zvakanyanya nekubira chitupa chako vozochitengesa kune vanhu vanoda hutsva, vanogona kutengesa ruzivo rwako kune nzvimbo dzekufonera, uye unogona kupedza makore matatu anotevera uchiudza vanhu iwe. 'havafariri chero sevhisi yavari kuedza kutengesa. Pavanozobvuma kuti kutungamira kwafa (kazhinji mushure mekurambwa kana kana kupfuura padivi pako), vanozotengesa nhamba yako kune imwe nzvimbo nerumwe ruzivo rwepawakapindura foni yako munguva yakapfuura.
MaHackers akafunga kuti vanhu vari kutsvaga dzimba vanoratidza zvakawanda nezvavo pavanenge vachitsvaga. Nzvimbo yavo, huwandu hwemari, chimiro chewanano, ukuru hwemhuri, uye zvimwe zvinhu zvese zviri nyore kufunga. Ruzivo urwu runogona kubatsira cybercriminals nekukurumidza kusefa kuburikidza neanogona kutariswa uye kusarudza izvo zvinozadzisa zvavanoda.
Nzwisisa Unsecured Networks
Chekutanga uye chakakosha, kana iwe uchitsvaga imba, unofanirwa kunge uchizviita pane network yakachengetedzwa. Manetiweki asina kuchengetedzwa anowanzo kuwanikwa nenzira yemahara eWi-Fi hotspots. Paunenge uchitsvaga painternet paraibhurari, uri munhandare yendege, muchitoro chekofi, muresitorendi, kana mukati mebhizinesi uchishandisa muenzi wavo Wi-Fi, unogona kunge uchishandisa network isina kuchengetedzwa. Nepo zvichigona kuve nyore kushandisa aya network kune chimwe chinhu chinokurumidza uye chakapusa, sekutarisa mamaki emutambo, haudi kunge uchiisa chero ruzivo rwemunhu kana mapassword pane aya network. Iwe zvakare hausi kuda kunge uchitsvaga zvinhu zvinoburitsa yako pachako data (dzimba, mahofisi ekurapa, sei-ye-kusiya-yako-basa zvinyorwa, nezvimwewo). Izvi zvinodaro nekuti chero ani zvake ari pane ino network anogona nyore kuwana zvauri kuita kana vachiziva sei (haisi maitiro akaoma). Chenjerera kuita chero kubhengi iwe uri pane network isina kuchengetedzwa. Ipfungwa yakanaka kuti usatsvagewo dzimba pavari.
Simbisa Kuvimbika Kwesaiti Uchiri Kutsvaga
Nekuti vazhinji vamiririri vezvivakwa vanotumira nezve dzimba dziripo pamawebhusaiti avo vobva vapa nhanho kana kufona kuchiito chinogona kuitwa kana iwe uchida kubata nekukurukura nezvemba, iwo akanakisa ekuunganidza-data kuseta. Iva nechokwadi chekutarisa zviratidzo izvo simbisa kuvimbika kwesaiti usati wagovera chero ruzivo kana kutora chikamu mune chero mafoni kuita chiito. Pane nzira shoma dzekuita izvi:
Tarisa chitupa cheSSL. MaURL akachengetedzwa anogara achitanga neHTTPS pachinzvimbo cheHTTP. Iyo 'S' inomirira yakachengeteka uye zvinoreva kuti saiti iri kushandisa Secure Sockets layer (SSL) chitupa. Chitupa ichi chinochengetedza data rinopfuudzwa kubva kubrowser kuenda kuserver yewebhusaiti. Iwe unogona kuwana iyo URL nekutarisa kero bar.
Tarisa zviratidzo zvekugadzirwa kwemazuva ano. Ekare dhizaini zvinhu zvinoonekwa zvemazuva kana madingindira anga asiri echimiro kwemakore anogona kuratidza kuti kodhi ndeyekare. Yechinyakare coding iri nyore kuti matsotsi apindire.
Shandisa maturusi ekuchengetedza. Zvishandiso zvekuchengetedza sewebhusaiti Virus Total inokutendera iwe kukopa nekuisa URL mubhokisi rekutsvaga uye woitisa nekukurumidza scan, ichikuzivisa iwe kana ikatora chero mireza mitsvuku. Funga kushandisa zvakachengeteka kubhurawuza sarudzo zvakare, uye ipa yako antivirus software mvumo yekutarisa yako online chiitiko.
Tarisa ma URL zvakanyatsonaka. Tarisa mavara asipo, typos, kana nyore-kupotsa-chinjana; izvi zvinogona kuratidza kuti saiti ndeye yakanyatso kuvakwa replica inoshandiswa nema hackers kuchera data. Dzimwe nguva idzi replicas dzakafanana kunze kweimwe tweak kune URL seGo0gle.com pachinzvimbo cheGoogle.com.
Tarisa kuti chero chekuchengetedza chisimbiso chinongedzo chinoshanda. Mamwe mawebhusaiti achange aine zvisimbiso zvinoita sekusimbisa kuchengetedzwa kwavo. Kana zviri pamutemo, zvisimbiso izvi zvinozoita sezvisungo zvinogona kudzvanywa; ivo vanofanirwa kutungamira kune webhusaiti yekambani inopa chisimbiso uye rumwe ruzivo nezve zvazvinoreva.
Tsvaga kuti ndiani muridzi wesaiti. Mawebhusaiti ese anofanirwa kunyoreswa pasi pezita remunhu kana sangano repamutemo. Mawebhusaiti akafanana Whois Lookup anogona kukurega uchitsvaga muridzi weimwe peji rewebhu.
Dzivisa masaiti ane spammy maficha. Zvinhu zvakadai semabhena anopenya, pop-ups ane zvivimbiso zvikuru, kana zvisingadaviriki mitengo yezvigadzirwa zvakaderera zvose zviratidzo zvekuti webhusaiti ndeye spam uye haigoni kuvimbwa nayo. Iva nehanya zvakanyanya nemitengo yedzimba yakanyanya kunaka kuti ive yechokwadi kana isina kujairika yekutengesa zvinzvimbo senge uchiti uri kunze kweguta asi uchikurudzira kuti uende unotarisa panzvimbo pasina ivo uye usina kiyi nekudongorera nepamahwindo. Dzimwe nguva kune mazita emanyepo edzimba dzisiri kutengeswa.
Tarisa Domain Chiremera uye Webhusaiti Backlinks
Kune mapuratifomu epamhepo anotendera iwe kukopa uye kuisa URL mubhokisi rekutsvaga. Paunotanga kutsvaga, iwe unozoratidzwa ine domain domain mamaki. Iyi inhamba yekutsvaga injini inopa imwe peji pakati pe zero uye zana inoratidza kuti yakavimbika sei injini dzekutsvaga dzinowana saiti. Iwe zvakare unowanzo kupihwa nhamba ye backlinks saiti ine; Backlinks chimwe chinhu icho vazhinji vezvivakwa vamiririri vanotariswa pavanenge vachivaka nzvimbo dzavo. Zvinoitika pese kana mamwe mawebhusaiti achireva saiti yauri kutarisa ine chinongedzo, iyi backlink. Mamwe backlinks anowanzo kureva kuti saiti iri kuvharirwa nemamwe mawebhusaiti.
Iva Unoziva ZveSocial Media
Social media inogona kuva chikomborero chinoshamisa; inotibatanidza nevanhu pasi rese vataisazokwanisa kutaurirana navo, inotibatsira kugara tichibatana nevanhu vekare, uye inogona kufambisa nharaunda dzeniche kune zvimwe zvekuzvivaraidza uye zvaunofarira. Izvi zvichitaurwa, social media inogona kugovera ruzivo rwakawandisa nevanhu. Iwe hausi kuda kuve uchitumira nezve yako yekutsvaga imba, uye iwe haudi kuve uchitumira nezve kana iwe uchishanyira ingangoita imba. Uku ndiko kushambadza kune mbavha kuti imba yako kana furati haina chinhu.
Ngwarira Paunenge Uchishandisa Mazita Ekutsvaga Mapuratifomu
Vazhinji vamiririri vanoshandisa maturusi anoratidza MLS (yakawanda rondedzero sevhisi) zvinyorwa zvakanangana nemawebhusaiti avo. Izvi zvinogona kupa avo vanotenga dzimba kuwana kune inoshanda zvinyorwa, asi ivo zvakare vanofanirwa kuchengetedza kuonana nevatengi uye ruzivo rwebhajeti mukuita. Mazhinji ekutsvaga injini dzekutsvaga anosanganisira sarudzo dzekumisa nemutengo, nzvimbo, nhamba yemakamuri ekurara, kana zvimwe zvinhu. Zvekare, zvinhu zvauri kushandisa kudzikisa pasi kutsvaga kwako kwemba zvakakosha zvakanyanya kune matsotsi. Muzviitiko zvakawanda, iwe unowana aya maturusi anonzi IDX, uye izvi zvinogona kukusiya uchinetseka chii chinonzi idx mune real estate? IDX inomiririra internet data exchange, uye ichokwadi izwi rakafara rinovhara marongero, software, uye zviyero vamiririri vanosungirwa kusangana kana vachiratidzira real estate listing ruzivo pamawebhusaiti avo. Iko kuchinjana uku ndiko kunobvumira vamiririri kuti vabatanidze zvakachengetedzeka zvinyorwa zvezvivakwa kubva kune dhatabhesi reMLS mumawebhusaiti avo.
Mabhurawuza mazhinji anokwanisa kuwedzera mabasa avo vachishandisa plugins, uye vashandisi veinternet vakawanda kupfuura kare vanofara kutora mukana weizvi. Kune mapulagi anoviga zvikamu zvekutaura paYouTube kana chikamu cheNewsfeed cheFacebook chehutano hwepfungwa hwevanhu kana hutsanana. Pane maplugins anokutendera kuti utsive mazwi painternet nechero chaunoda, zvichireva kuti unogona kudzivirira kubata nenyaya dzezvematongerwo enyika dzawaneta nekunzwa nezvazvo. Kune maplugins ekubvisa kushambadza, kugadzira uye kurangarira mapassword akasimba, uye nezvimwe zvakawanda. Maplugins anogona kushandura yako yese internet ruzivo kuti ive nani, asi zvakakosha kuti uverenge plugin yekuvanzika mutemo kuti uve nechokwadi chekuti vari kuremekedza zvakavanzika zvako. Mazhinji ane sarudzo dzinokutendera kuti udzime tracking. Kana paine plugin yausingakwanise kurarama pasina asi uchinetsekana nezve chengetedzo ye, ziva kuti iwe unogona kazhinji kudzima plugin nyore kana iwe usingaride uye inoshanda (ingova nechokwadi mune zvakavanzika mutemo izvi zvinoreva kuti kwete Kutevera kwenguva refu).
Taura Neako Real Estate Agent
Nekuti vamiririri vari kubata nekutsvaga kutsvaga uye kuvanzika kwevanhu kazhinji, mumiririri wako angangokwanisa kukupa mamwe anonongedzera. Kana mumiririri wako achiziva nezvekuchengetedza matanho uye inopa kutsvaga kweMLS pane yavo webhusaiti, namatira kune yavo peji rewebhu pakutsvaga kwako. Nenzira iyi, haufanirwe kunetseka nezve vamwe vamiririri vanotora ruzivo rwako kana avo vanopa webhusaiti vanotora ruzivo rwako pasina ruzivo rwavo.
DuckDuckGo imwe yeinjini yekutsvaga inodada nekuchengetedza nhoroondo yako yekutsvaga yakavanzika uye nekuvharira ekushambadzira matracker ayo anokutevera pawebhu uye anounganidza data rako. Zvinowanzotora vhiki kana maviri kugadzirisa kuDuckDuckGo (yakafanana kana iwe ukawana foni itsva uye uri mutsika yezvinhu kushanda neimwe nzira). Izvi zvinodaro nekuti DuckDuckGo haichengetedze ruzivo rwako uye shandisa izvi kufanotaura zvaunoda kuwana online paunenge uchitsvaga. Panzvimbo pekukupa zvaunofunga kuti unoda zvichibva paruzivo rwayakaunganidza, DuckDuckGo inokupa iyo inonyanya kufarirwa mhedzisiro yekutsvaga.
Iva Kuchenjerera Around Cookies
Cookies mukati uye pachake haana kuipa; anowanzo kushandiswa nemawebhusaiti kugadzirisa ruzivo rwako rwekubhurawuza. Izvi zviri kutaurwa, vanogona zvakare kumhan'arirwa kuti vachengete magwaro ako ekupinda, kubhengi kana kadhi rechikwereti, nzvimbo, mitauro yaunofarira, uye zvimwe zvinhu. Kazhinji paunotanga kusvika pane peji, pachave nepop-up maererano nemakuki. Ipfungwa yakanaka kudzvanya "wongororo" pachinzvimbo chekuti "gamuchira" uye kusasarudza chero makiki asina basa. Kazhinji unozofanirwa kudzvanya "chengetedza zvandinoda." Zvinogona kutora mamwe masekonzi mashoma pane kushanyira peji zvinowanzoitika, asi zvinobatsira kuchengetedza ruzivo rwako.
Shandisa A VPN
VPN ndiyo imwe yedzakareruka nzira dzekuchengetedza nzvimbo yako kana uchishandisa internet. VPNs inokupa imwe kero yeIP zvichireva kuti chero munhu arikutevera mudziyo wako kana maitiro (anova akawanda maapplication uye mawebhusaiti nhasi) achange ari pasi pekufunga kuti uri kumwe kunhu. Vazhinji VPN vanopa zvakare vanokubvumidza iwe encrypt internet traffic. Sebhonasi, masevhisi eVPN anogona kukupa iwe kuwana kune zvirimo zvinoenderana nedunhu.
Vazhinji vane mukurumbira maimeri vanopa seGmail neYahoo vanounganidza ruzivo rwemunhu, ivo vobva vagovana nenharaunda yavo nekuda kwezvikonzero zvakati. Kune asingazivikanwe email masevhisi seProtonMail, ayo anotendera iwe kuti uchengetedze chitupa chako chakachengetedzwa. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kugovera email yako pamhepo kumaakaundi uye zvinangwa zvekupinda, sezvo iwe usingade kunetseka nezve izvo saiti iri kuita neemail yako.
Mazano ari pamusoro anofanira kukubatsira kuti uchengetedze paunenge uchitsvaga imba online. Ehe, mazhinji emapoinzi aya anoshanda kune isiri-real estate yekutsvaga zvakare.